Brainstorm – NAB Show News by Broadcast Beat. Official Broadcaster of NAB Show, Producer of NAB Show LIVE
RASCULAR IBC 2018 စမ်းကြည့်ရန်
Home » Tag Archives: နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူ
Tag Archives: နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူ
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူရစ်ဖစ်များနှင့် Template-based Solutions ၎င်း၏တိုးပွား Reality ပိုကောင်းစေပါတယ်
InfinitySet3အသစ်သောအဆင့်မြင့်တိုးပွား Reality နှင့်ဂရစ်ဖစ် features တွေလက်ခံ၏။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူ SmartSet တစ်ဦး template ကို-based ကို Virtual သတ်မှတ်ရန်နှင့်မြှင့်တင်ရန်ဒီဇိုင်းလုပ်ခဲ့ပြီး Reality ဖြေရှင်းချက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူ၎င်း၏ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးတစ်လျှောက်လုံး NAB3သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများမှာမိတ်ဆက်စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် Real-time 2017D ဂရပ်ဖစ်နှင့်ကို virtual set ကိုဖြေရှင်းနည်းများ, ထောက်ပံ့ထံအပ်နှံအထူးကုကုမ္ပဏီဖွင့်ပါလိမ့်မယ် ယင်း၏တိုးပွား Reality နှင့်ဂရစ်ဖစ်ဖြေရှင်းနည်းများ။ မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီ never.no နှင့်အတူ ...
VisualMedia, လူမှုရေးအကြောင်းအရာများနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူ, စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် Real-time 3D ဂရပ်ဖစ်နှင့်ကို virtual set ကိုဖြေရှင်းနည်းများနှင့် never.no ပေးထံအပ်နှံအထူးကုကုမ္ပဏီ၏ Real-time 3D visualization များအတွက်ဘက်ပေါင်းစုံဖြေရှင်းချက်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ NAB မှာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူနှင့် never.no အဖွဲ့သည်တက်, လူမှုတီဗီအာကာသအတွင်းရှေ့ဆောင်တွေ, အမြင်အာရုံဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူမှုတီဗီအကြောင်းအရာကိုဖန်တီးရန် VisualMedia တစ်ဦးတို့ပူးတွဲတီထွင်, ဘက်ပေါင်းစုံဖြေရှင်းချက်ကြေညာဖို့ဂုဏ်ယူနေကြသည် ...
SmartSet, template ကို-based တိုးပွား Reality နှင့်အသေးစားထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ရဲ့ Virtual သတ်မှတ်ပေးသည်
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူအသေးစားနှင့်ဒေသခံတီဗီဘူတာများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော, အရည်အသွေးမြင့် template ကို-based ဖြေရှင်းချက်အကွာအဝေးကိုမိတ်ဆက်။ Virtual သတ်မှတ်မည်, လုပ်ခဲ့ပြီး Reality နှင့် Motion Graphics ဖြေရှင်းချက်၎င်း၏လက်ရှိနှင့်မြင့်မားသောအဆင့်မြင့်အကွာအဝေးကိုဖြည့်ဖို့ NAB မှာ template ကို-based ဖြေရှင်းချက်၏သစ်တစ်ခုအကွာအဝေးမိတ်ဆက်စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် Real-time 3D ဂရပ်ဖစ်နှင့်ကို virtual set ကိုဖြေရှင်းချက်ပေးထံအပ်နှံနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူတစ်အထူးကုကုမ္ပဏီ, ။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူ template ကို-based ထုတ်ကုန် play ...
InfinitySet3- အံ့သြဖွယ်တိုးပွား Reality အကြောင်းအရာကိုဖန်တီးရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူင်း၏ဆုရရဲ့ Virtual သတ်မှတ်ရန်နှင့် ပို. ပင်ဂရပ်ဖစ်တန်ခိုးနှင့်တိုးပွား Reality ဖြေရှင်းချက်နဲ့အထူးပြု AR / VR toolset နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူ, စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် Real-time 3D ဂရပ်ဖစ်နှင့်ကို virtual set ကိုဖြေရှင်းချက်ပေးထံအပ်နှံအထူးကုကုမ္ပဏီအာဏာ, NAB မှာဗားရှင်းအသစ်ကိုကြေညာခဲ့ပါတယ် InfinitySet, ထိုဆုရတိုးပွား Reality နှင့် Virtual သတ်မှတ်မည်ဖြေရှင်းချက်၏။ ယခုပင်လျှင်ရဲ့ Virtual သတ်မှတ်မည်ထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးအဆင့်မြင့်ဖြေရှင်းချက်ထည့်သွင်းစဉ်းစား ...
Archives လကိုရွေးချယ်ပါ ဇူလိုင်လ 2018 (498) ဇွန်လ 2018 (869) မေလ 2018 (871) ဧပြီလ 2018 (831) မတ်လ 2018 (780) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (685) ဇန်နဝါရီလ 2018 (605) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (396) နိုဝင်ဘာလ 2017 (712) အောက်တိုဘာလ 2017 (835) စက်တင်ဘာလ 2017 (608) သြဂုတ်လ 2017 (583) ဇူလိုင်လ 2017 (710) ဇွန်လ 2017 (543) မေလ 2017 (621) ဧပြီလ 2017 (695) မတ်လ 2017 (704) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (340) ဇန်နဝါရီလ 2017 (364) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (608) နိုဝင်ဘာလ 2016 (344) အောက်တိုဘာလ 2016 (556) စက်တင်ဘာလ 2016 (622) သြဂုတ်လ 2016 (1056) ဇူလိုင်လ 2016 (532) ဇွန်လ 2016 (414) မေလ 2016 (505) ဧပြီလ 2016 (713) မတ်လ 2016 (743) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (382) ဇန်နဝါရီလ 2016 (122) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (358) နိုဝင်ဘာလ 2015 (327) အောက်တိုဘာလ 2015 (152) စက်တင်ဘာလ 2015 (259) သြဂုတ်လ 2015 (440) ဇူလိုင်လ 2015 (276) ဇွန်လ 2015 (140) မေလ 2015 (128) ဧပြီလ 2015 (435) မတ်လ 2015 (289) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (298) ဇန်နဝါရီလ 2015 (131) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (103) နိုဝင်ဘာလ 2014 (194) အောက်တိုဘာလ 2014 (149) စက်တင်ဘာလ 2014 (381) သြဂုတ်လ 2014 (250) ဇူလိုင်လ 2014 (287) ဇွန်လ 2014 (363) မေလ 2014 (231) ဧပြီလ 2014 (744) မတ်လ 2014 (560) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (427) ဇန်နဝါရီလ 2014 (289) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (137) နိုဝင်ဘာလ 2013 (545) အောက်တိုဘာလ 2013 (290) ဇူလိုင်လ 2013 (26) မေလ 2013 (13) ဧပြီလ 2013 (1) မတ်လ 2013 (2)0(306)
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူယင်း၏တိုးပွား Reality တိုးမြှင့်, ရစ်ဖစ်များနှင့် Template-based Solutions" ။ http://www.broadcastbeat.com/brainstorm-enhances-its-augmented-reality-graphics-and-template-based-solutions/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။